Vata fampangatsiahana indostrialy vita amin'ny vy tsy ara-barotra sy vata fampangatsiahana mahitsy
Ny lakozia rehetra, na manao ahoana na manao ahoana habe, dia mitaky harona fitahirizana mangatsiaka iray na maromaro. Ny vata fampangatsiahana anao dia ho fitaovana ampiasaina be indrindra ao an-dakozanao, noho izany dia tianao ny misafidy ny singa tsara indrindra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny filaharana fampangatsiahana araka ny tokony ho izy dia afaka manangona vola, manatsara ny kalitaon'ny serivisinao ary manatsara ny hafainganan'ny serivisinao.
1. Fananganana Compressor ara-teknika sy fanafarana any Italia
2. Ny fantsona varahina anatiny sy avo lenta no manao.
3. Kanto malala-tanana sy tanjaka, mitazona ny fiasan'ny maripana dia tonga lafatra.
4. Ny vatan'ny boaty dia mampiasa fitaovana vy tsy misy fangarony 304, ny fomba fampangatsiahana azy dia mampihena ny hatsiaka, ny rivotra mangatsiaka dia mahatratra ny vokatra tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra.
Zibo Eric Intelligent Technology Co., Ltd. mifantoka amin'ny sehatry ny lakozia lakozia ara-barotra. Niorina tamin'ny taona 2004 ny vondrona ary miorina ao amin'ny faritra indostrialy Boxing County, faritany Shandong. Ny orinasa dia mamokatra vata fampangatsiahana, sakafo tandrefana ary vokatra vy fotsy, fampidirana teknolojia, indostria ary varotra ary miaraka amina teboka avo fanombohana. Miaraka amin'ny fitsipiky ny vokatra avo lenta sy avo lenta, ny orinasa dia manolo-tena hijerena ireo tsena anatiny sy ivelany ary efa malaza efa ho 10 taona izao.
1) Andro fandefasana: 10 ~ 30 andro aorian'ny nahazoana totalin'ny fandoavam-bola amin'ny famokarana samihafa.
2) Fonosana fitaovana: fonosana baoritra.
3) Ny sasany amin'ireo sarinay fonosana.
Ny serivisy ODM & OEM dia raisina an-tanan-droa, manana ny ekipanay R&D manokana ary nanamboatra famolavolana sy famokarana indostrialy nandritry ny 10 taona mahery. fohy ny fotoana famokarana dia fohy kokoa noho ny mpifaninana.
F1: Aiza ny orinasa misy anao? Ahoana no fomba hitsidihako any?
A: Ny orinasa misy anay dia miorina any amin'ny faritra indostrian'ny ady totohondry, faritanin'i Shandong. Ny mpanjifanay rehetra, na avy any an-trano na any ivelany, dia arahaba fatratra hitsidika anay!
F2: Inona ny ora fanaterana?
A: Maharitra 7 ~ 25 andro matetika aorian'ny nahazoanao ny vola napetrakao. Azafady mba zahao aminay raha misy tahiry misy.
F3: Ahoana no ataon'ny orinasao momba ny fifehezana kalitao?
"Ny laharam-pahamehana no laharam-pahamehana. '' Ny mpanara-maso anay dia hanamarina ny entana amin'ny fomba rehetra ary hanova ny ampahany raha vao misy olana avy amin'izy ireo. Ho hitan'ny mpivarotra koa ny entanay ary haka sary isaky ny fomba hanamafisan'ny mpanjifanay.
F4: Raha manana olana kalitao ny vokatra dia ahoana no hiatrehanao izany?
Ny vokatray dia novokarina tamin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra ary ny tahan'ny lesoka dia latsaky ny 0.2%. Ho an'ny kilema tsy mandeha
vokatra, hamboarinay izy ireo ary halefa any aminao indray, na azonay resahina ny vahaolana, ao anatin'izany ny fiantsoana olona araka ny zava-misy marina.
Manaraka: Biraon'ny vy tsy misy fangarony
Sarety serivisy sakafo 2 sosona 02
Tabilao fiasana vy tsy misy fangarony 7
Tabilao fiasana vy tsy misy fangarony 4
Tabilao fiasana vy tsy misy fangarony 8
Kabinetra Stainless vy 2